HPA ဆုပေးပွဲကိုဖွင့်ကို Creative အုပ်စုများအတွက် Entries များအတွက်ခေါ်ရန် - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » HPA ဆုပေးပွဲကို Creative အုပ်စုများအတွက် Entries များအတွက်ခေါ်ဆိုမှုဖွင့်ပါ
HPA ဆုပေးပွဲကို Creative အုပ်စုများအတွက် Entries များအတွက်ခေါ်ဆိုမှုဖွင့်ပါ
အဆိုပါ ဟောလိဝုဒ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်း (HPA®) သည် HPA ဆုပေးပွဲအဘို့ဖန်တီးမှုအမျိုးအစားထဲမှာ entries တွေကို၎င်း၏ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုသူတို့၏ 14 အတွက်ဆုပေးပွဲ,th တစ်နှစ်, အရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်တည်းဖြတ်ရေး, အသံများနှင့်အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်, Episode နှင့်ကြော်ငြာများတွင်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအတွက်ဖန်တီးမှု artistry အသိအမှတ်ပြု, အလုပ်နှင့်အနုပညာထူးချွန် groundbreaking များအတွက်အရေးကြီးသောအသိအမှတ်ပြုမှုအဖြစ်ယူဆနေကြသည်။ အဆိုပါ 14th HPA ဆုပေးပွဲ Gala အတွက် Skirball ယဉ်ကျေးမှုစင်တာမှပြန်လာပါလိမ့်မည် Los Angeles မြို့ကယ်လီဖိုးနီးယားကြာသပတေးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 21, 2019 ၏ညနေပိုင်းတွင်ပေါ်မှာ။
အဆိုပါ HPA ဆုပေးပွဲကြောင့်လောင်စာအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီဒီယာအကြောင်းအရာလုပ်ငန်းအခွက်တဆယ်နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖို့အာရုံကိုဆွဲရန်ပဋိသန္ဓေယူခဲ့ကြသည်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူ၏ရူပါရုံကိုအဆိုပါ HPA ဆုပေးပွဲ၏အာရုံဖြစ်နေဆဲပံ့ပိုးကူညီသူမြင်ကွင်းတစ်ခုပူးပေါင်းနောက်ကွယ်ကကိုဂုဏ်ပြုသော။
ထူးချွန်အရောင်တန်း - ပြဇာတ် Feature ကို
ထူးချွန်အရောင်တန်း - အပိုင်းသို့မဟုတ် Non-ပြဇာတ် Feature ကို
ထူးချွန်အရောင်တန်း - ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်
ထူးချွန်တည်းဖြတ် - ပြဇာတ် Feature ကို
ထူးချွန်တည်းဖြတ် - အပိုင်းသို့မဟုတ် Non-ပြဇာတ် Feature ကို (30 မိနစ်နှင့်လက်အောက်တွင်)
ထူးချွန်တည်းဖြတ် - အပိုင်းသို့မဟုတ် Non-ပြဇာတ် Feature ကို (30 မိနစ်ကျော်)
ထူးချွန်အသံ (ဒီဇိုင်း, တည်းဖြတ်, ရောစပ်) - ပြဇာတ် Feature ကို
ထူးချွန်အသံ (ဒီဇိုင်း, တည်းဖြတ်, ရောစပ်) - အပိုင်းသို့မဟုတ် Non-ပြဇာတ် Feature ကို
ထူးချွန်အသံ (ဒီဇိုင်း, တည်းဖြတ်, ရောစပ်) - ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး
ထူးချွန် Visual Effects - ပြဇာတ် Feature ကို
ထူးချွန် Visual Effects - အပိုင်းသို့မဟုတ် Non-ပြဇာတ် Feature ကို (13 ဇာတ်လမ်းတွဲများနှင့်ပိုနည်း)
ထူးချွန် Visual Effects - အပိုင်း (13 ဇာတ်လမ်းတွဲများကျော်)
ယင်းဖန်တီးမှုအမျိုးအစားနှင့် HPA ဆုပေးပွဲအားလုံးအတှကျ complete စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ, လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အ entry ကိုသတင်းအချက်အလက်မှာရရှိနိုင်နေသောခေါင်းစဉ်: www.hpaawards.net.
ယင်းဖန်တီးမှုအမျိုးအစားထဲမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားဘို့တင်ပြမေလ 13 နှင့်ဇူလိုင်လ 12, 2019 အကြားကိုလက်ခံလိမ့်မည်။ (ထိုဖန်တီးမှုအမျိုးအစားတစ်ခုလျှော့ချ entry ကိုအခကြေးငွေမှာ) အစောပိုင်း Bird ကို entries တွေကိုဇွန်လ 10, 2019 မှတဆင့်လက်ခံခဲ့သည်လိမ့်မည်။ အရည်အချင်းပြည့်မီစဉ်းစားခံရဖို့, အလုပ်စက်တင်ဘာလ 5, 2018 တော်အားဖြင့်, အရည်အချင်းပြည့်မီကာလ, စက်တင်ဘာလ3ကာလအတွင်းပြည်တွင်း၌နှင့် / သို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာတွင် 2019 ပွဲထွက်ခဲ့ပြီးကြပါပြီရပါမည်။ တွေဟာလည်းအဆိုပါအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး ဟောလိဝုဒ် US မှာ Professional ကအသင်းမှသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ကိုင်
ရှေ Hallen သည် HPA ၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့် HPA ဆုပေးပွဲကော်မတီဝင်တစ်တည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝင်တဦး, အဆိုပါ HPA ဆုပေးပွဲအတွက် HPA သူ့ဟာသူအကြောင်းအရာ၏ဤမျှလောက်ကိုယ်စားပြု "commented အဆိုပါ artistry ကောင်းစွာ-ထိုက်တန်တဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်အရာ, လိမ္မာပါးနပ်နှင့် flat- ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူ '' ဖန်တီးမှုရူပါရုံနားလည်သဘောပေါက်ကိုကူညီသူကိုဖန်တီးမှုလူများ၏အသိုင်းအဝိုင်းထဲကထက်မြက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာသကဲ့သို့ပင်, အဘယ်အရာကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေဆဲအဆိုပါခွက်တဆယ်ရဲ့နောက်ကွယ်ကအခွက်တဆယ်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့နှင့်ကျင်းပနေများအတွက် HPA ရဲ့စစ်မှန်တဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်၏။ "
အဆိုပါ HPA ဆုပေးပွဲမြင်ကွင်းများနောက်ကွယ်မှတီထွင်ဖန်တီးမှုတစ်ခုတစ်ခုလုံးကို spectrum ကိုအသိအမှတ်မပြု။ အဆိုပါ HPA အင်ဂျင်နီယာ Excellence Award ဆုကိုများအတွက် entries တွေကိုများအတွက်ခေါ်ဆိုခပြီးခဲ့သည့်လကဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်တင်ပြမေလ 24, 2019 သည်အထိလက်ခံခဲ့သည်လိမ့်မည်။ တီထွင်ဖန်တီးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအတွက်တရားသူကြီးမှတ်စာ Award ဆုတစ်ဂျူရီဆု, အ Gala ၏ကြိုတင်ကြေညာပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ HPA တစ်သက်တာအောင်မြင်မှုဆုချီးမြှင့်ခြင်း၏စာလက်ခံသူကလာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းထုတ်ပြန်ကြေညာပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ HPA ဆုပေးပွဲဆုပေးပွဲခေါင်းစဉ်စိန်စပွန်ဆာအတွက်ရက်ရက်ရောရောစပွန်ဆာမှတဆင့်တတ်နိုင်သမျှလုပ်နေကြတယ် Blackmagic ဒီဇိုင်း, ပလက်တီနမ်ပံ့ပိုးကူညီ IMAXနှင့်ဖောင်ဒေးရှင်းမှအဖွဲ့ဝင်များ လွန်စွာလိုလားသော, Co3, Deluxe, Dolby, EFILM နှင့် Encore ။ စပွန်ဆာသို့မဟုတ် program ကိုကြော်ငြာခွင့်အလမ်းများကိုအဘို့မှာ Joyce Cataldo ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် [အီးမေးလျ protected]။ လက်မှတ်အရောင်း၏ကြေညာချက်ဇွန်လအတွက်လုပ်လိမ့်မည်။
ယခင်နှစ်က '' ဆုရရှိသူများစာရင်းကိုအဘို့, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဒီမှာ.
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ လွန်စွာလိုလားသော ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida အရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည် တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor HPA ဖားအံဆု SJGolden - အသံက ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို က Ultra HD ဖိုရမ် Visual Effects	2019-05-14
ယခင်: Hipica တီဗီ Daily သတင်းစာ, တိုက်ရိုက်အာဇာနည်ပြိုင်ပွဲ Programming Enhance မှ Envivo ပြန်ဖွင့်ရွေးချယ်
နောက်တစ်ခု: NDTV မြက်ချိုင့်ထဲကနေပိုကောင်းတဲ့သတင်းထုတ်လုပ်မှု suite ကိုနှင့်အတူမည်သည့် device ကိုပေါ်, အချိန်မရွေး, နေရာမရွေးပုံပြင်များရရှိသွားတဲ့